Waa maxay xarunta taageerada Samatabaxayaasha Dadka fal galmo ehelkoodu kula kacay iyo xad gudubka galmada (SMISO) - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Waa maxay xarunta taageerada Samatabaxayaasha Dadka fal galmo ehelkoodu kula kacay iyo xad gudubka galmada (SMISO)
Xaga xarunta Taageerada ee ka samata baxayaasha Dadka ehelkoodu fal galmo u gaysto ama dadka xad gudubka galmada loo gaystay xad gudub waxay helaan taageerada ay kaga gudbaan waaya aragnimadooda. Muhiim ahaan xarunta waa adeeg is kaalmaysi ah oo loogu talo galay dadka waa wayn ee loo gaystay fal galmo oo ehelkoodu u gaystay ama kufsi, iyo qaraabadooda.
Xarumaha waxay siiyaan adeeg bilaasha ah iyo shaqo sidii kaabbid ah qaybta nidaamka taageerada dad waynaha, oo uma baahna gudbin si loo sameeyo xidhiidh.
La talinta telefoonka
La talinta gaarka ah
ka qayb galka kooxaha is caawinta
kooxaha kale ee la xidhiidha
Adeegan waa uu ka duwanaan karaa xarun ilaa mida kale. Xarumahu waxay sameeyaan beddelaad heerarka kala duwan ah si ay ugu oggolaadaan isticmaalayaasha inay u kaalayaan xarunta is dhex galka rasmiga ah ee isticmaalayaasha kale. Sidoo kale waxaa jira ikhtiyaar ay leeyihiin isticmaalayaashu si ay qorshaha ku qaataan oo ku abaabulaan nafahoodu hawlo kala duwan. Xarumuhu waxay u furanyihiin xubnaha qoyska iyo kuwa kale ee adigu kuu dhow, oo xarumaha qaarkood waxay bixiyaan adeega carruurta. Xarumuhu waxay sidoo kale fuliyaan shaqada ka hortagga, sida waxbarashada iyo macmuulaadka shaqada kale.
SIDAN AYAA LAGUUGU QAABILAYAA XARUNTA KA HORTAGGA XADGUDUBYADA KUFSI:
Xaga xarumaha waxaad kula kulmi kartaa kuwa kale kuwaas oo la kulmay xad gudub galmo. Shaqaalaha ka shaqeeya xarumaha waxay heleen tababar khuseeya iyo/ama waxay la kulmeen iyaga laftoodu xad gudub galmo.
Waxa la qarin karaa magacaaga, taas waxaa loola jeeda, uma baahnid inaad bixiso magacaga marka aad la xidhiidho xarunta. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Isticmaalayaasha kale ee xarunta gaboodka looma oggola inay kala hadlaan wax ku saabsan xaaladaada kuwa kale. Xarumahu waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.
Maalmahan, dhammaan wadamada waxay leeyihiin ugu yaraan hal xarun oo loogu talo galay samamtabaxayaasha falka galmo ee ehelkoodu kula kaco iyo xad gudubka galmada. Xarumaha waxay ka helaan maalgelinta dowladda dhexe iyo dowladda hoose.
Waxaa jira telefoonka khadka caawinta qaranka 24- saac oo loogu talo galay dhibanayaasha falka galmo ee ehelkoodu kula kaco iyo xad gudubka galmada. Tan waxaa ku hawlagsha Xarunta Dadka ehelkoodu fal galmo kula kacay oo ku taala degmadda Vestfold.
Sidoo kale arag Lambarka telefoonka qaranka - khadka telefoonka caawimada 24-saacadood ee dhibanayaasha ddka ehelkoodu fal galmo kula kacay iyo xad gudubka galmada iyo qaraabadooda, bilaasha uga wac: 800 57 000